Lalao RAVALOMANANA : nitso-drano ny kilonga hanala fanadinana – MyDago.com aime Madagascar
Lalao RAVALOMANANA : nitso-drano ny kilonga hanala fanadinana
« E fa nanendry anao ho fahazavan’ny jentilisa Aho. Mba ho famonjena hatrany amin’ny faran’ny tany hianao » Asa.13 :47b . Io no andinin-t soratra masina nentin’Atoa ZARAZAKA Jean Louis Mpitandrina mivady nitondrana ny teny faneva tamin’ny fankalazana ny fotoam-pankasitrahana azy mianakavy noho ny fahatrarana ny faha-7 taona ny fiaraha-miasa tamin’ny fiangonana Ambohitranjavidy Famonjena sy ny faha 10 taona naha-Mpitandrina azy. Tonga nanotrona ny famaranana ny fotoan-dehibe izany ny vadin’ny filoha mpanampin’ny FJKM, Ramatoa Lalao Ravalomanana, androany tany Moramanga, Synodam-parintany Mangoro Moramanga. Nitarika ny fotoana ny Presidà Synodaly Atoa RAKOTONINDRAINY Jaona mitandrina ary ny nitoriteny kosa ny Mpitandrina Presidà Synodaly Atoa RAKOTONOELY Félix. Tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny filoha mpanampin’ny FJKM ny mpitandrina ZARAZAKA Jean Louis no nisaorany ny rehetra tamin’izao fitrotroana am-bavaka azy mianakavy izao. Nankasitraka manokana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana ihany koa ny tenany tamin’ny fanotronana ny fotoam-pankasitrahana azy. « Tsy irery ianao ry Neny amin’ny fikasana tsara ataonao fa mivavaka ho anao hatrany izahay, ary tena mivavaka, tena hiasa ho anareo. Toy ny mahita ny filoha mpanampy hatrany aho mahita anao etoana » hoy ny mpitandrina Zarazaka. Tsy adinony ihany koa ny nanao fotoam-bavaka manokana nitsofan-drano ireo kilonga hiatrika fanadinana.
Tamin’ny fandraisam-pitenenana nentin-dRamatoa Lalao Ravalomanana no namerenany hatrany ny fisaorana noho ny fiombonam-bavaka nataon’ny mpino tamin’izy mianakavy tsy teto an-tanindrazana nandritra ny efataona izay. Amin’ny fo feno fitiavana no anolorako ny fisaorana anareo amin’ny fiderana hoy izy.Tsindriako manokana ianao Pasitera Zarazaka hoy i Neny, arabaina ianao fa nifidy ny asa tsara indrindra .
Nitso-drano hoan’ireo mpianatra hiatrika fanadinana ihany koa i Neny teto : “ianareo no ho avin’ny firenena, mahaiza mihanta amin’ny Jesoa hoy izy fa izy no hitarika ny lalanareo”.
Marihina fa ny Synodam-parintany Mangoro dia ahitana fitandremana miisa 300 ao anatin’ny distrikta 3 dia i Moramanga, Anosibe An’ala ary Brickaville. Ahitana mpitandrina 43 mianadahy mipariaka amin’izany fitandremana izany, ary miisa 3000 ny mpianatra mianatra ao amin’ny sekoly FJKM.
Lalao Ravalomanana tao amin’ny FJKM KAMAFA Antsirabe : « Mampanantena fandresena ny Tompo »
Auteur Solo Razafy*Publié le 6 juillet 2013 7 juillet 2013 Catégories Politique
2 pensées sur “Lalao RAVALOMANANA : nitso-drano ny kilonga hanala fanadinana”
Mahereza ry kilonga isany ary milofosa.
7 juillet 2013 à 22 h 54 min
tsy maintsy ihany ianao inadraindray ry dâ ,jereo ity zavamisy ankehitriny??
mampiseho hagegena andro aman’alina ny alika.
Précédent Article précédent : RAKOTOARIVELO MAMY : Tsy misy ambonin’ny lalàna eto.
Suivant Article suivant : TONGA ETO MADAGASIKARA NY MPAMPIHOROHORO